CentOS7final ကိုယခု download လုပ်ယူနိုင်ပါပြီ Linux မှ
CentOS7final ကိုယခု download လုပ်နိုင်ပါပြီ
Fromlinux မှသူငယ်ချင်းများ၊ လွန်ခဲ့သောသုံးပတ်ကကျွန်ုပ်သည် Fnedora 20 ကို Gnome-shell နှင့်အသုံးပြုနေကြောင်းပြောခဲ့သည်။ CentOS7သူတို့ရဲ့ RC's ၌တည်၏။
ဒီ Red Hat RHEL ကိုယ်ပွားဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုနှစ်သက်သူများအတွက်ကျွန်ုပ်ရရှိသောသတင်းမှာထိုအရာဖြစ်သည် နောက်ဆုံးဗားရှင်းယခုရရှိနိုင်ပါသည်.
Centos7မှကျွန်ုပ်တို့ကိုဘာတွေယူဆောင်လာသနည်း။
ဤဗားရှင်းတွင်လူသိများသော Kernel ကို 3.10, Gnome 3.8.4 သို့မဟုတ် KDE 4.10 နှင့်၎င်း၏ပုံမှန်ဖိုင်မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ် XFS သင်တန်းပေမယ့်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် EXT4 o BTRFS ငါက၎င်း၏စံနမူနာစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက် XFS အပြည့်အဝအကြံပြုပေမယ့်။ ဒါ့အပြင် desktop ကိုချစ်သူများအဘို့ အိမ်ထောင်ဖက်, ဒီ အဆိုပါ EPE repository ကိုအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်L :)
လွန်ခဲ့သောတစ်လက RHEL မှကြေငြာခဲ့သောမှတ်စုများနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်နောက်ထပ် ado မပါပဲငါဒီမှာစပိန်အတွက်တိုက်ရိုက်လင့်များထားခဲ့ပါ:
GNOME KDE CentOS ဒီဗီဒီ (ကွန်ပျူတာနှစ်မျိုးလုံးပါ ၀ င်သည်): Full-DVD (အားလုံးပါဝင်သည်) NetInstall
md5 သို့မဟုတ် sha256 ပမာဏကိုစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်သည်သက်ဆိုင်ရာဖိုင်မှထွက်ခွာသည်။
ယောက်ျားများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်တရားဝင်မဖြစ်မီသင့်အားငါပေးသည့်အကြောင်းမှတ်ချက်ပေးရန်မမေ့ပါနှင့်။ 🙂 :) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » CentOS7final ကိုယခု download လုပ်နိုင်ပါပြီ
တစ်စုံတစ်ယောက်က md5 ဆိုတာဘာလဲကိုအတိုချုပ်ရှင်းပြပေးနိုင်မလား။
md5sum ဖြင့်ပုံများကိုစစ်ဆေးသည်။ အကယ်၍ သင် discs များကိုမှန်ကန်စွာ download လုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင်လာပါ။
နှစ်ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာစာမူပေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော် install လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလမ်းညွှန်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။
ဝမ်းနည်းပါတယ်, petercheco, ငါတို့ကပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အချိန်မရခဲ့သည်။ 🙁
မင်းရဲ့အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တောင်းပန်ဖို့မလိုပါဘူး။ D. ။ ငါသတင်းကိုဤကဲ့သို့အရေးကြီးသောအရာအဖြစ်သိစေချင်။ ထွက်မလာခြင်းအပေါ်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်မိသည်။ သို့သော်ဟေး၊ အကယ်၍ သင်သည်တစ်စုံတစ် ဦး မှပို့စ်တင်နေသည်ကိုသင် ၂၄ နာရီစောင့်ဆိုင်းနေမည်မဟုတ်ကြောင်းယုတ္တိရှိသည်။ တစ်ခုခု .. ဒါဟာလုံးဝနားလည်နိုင်ပါတယ်: D. သင်တို့ရှိသမျှသည်ယောက်ျားလေးများနှင့်အတူသင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်သည်
ကောင်းပြီ၊ အခု CentOs ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ post ကိုစောင့်ပါ။
ဟဟားဟား… အလေးအနက်ထား, ကောင်းသော, ငါ့ server ကိုကြိုးစားရန် ....
သင် livecd ကိုသုံးနိုင်ပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 32 bts ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Red Hat မှသူများသည် 32 bit ကိုဘေးဖယ်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီး၎င်းတို့တွင် 64 bit ဗားရှင်းသာရှိသည်။ developer များအနေဖြင့် CentOS ၏ 32 bit version ကိုပြုလုပ်ရန်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများရှိသော်လည်းအဘယ်အရာကိုမျှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေ။
အလွန်ကောင်းမွန်သောဆောင်းပါး၊ သို့သော် XFS အကြောင်းပြောသောအခါဖိုင်မန်နေဂျာနှင့်သင်ရှုပ်ထွေးနေသည်ဟုထင်ပါသည်။
ဖြစ်နိုင်တယ် .. ငါတောင်းပန်ပါတယ်😀
ငါအမြဲတမ်းဒီ distro နှင့်အတူမေးခွန်းတစ်ခုအစဉ်အမြဲရှိခဲ့ပါတယ်, က desktop ပေါ်မှာသုံးနိုင်သလားသို့မဟုတ်ဆာဗာများအတွက်သာလား
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကို desktop ပေါ်မှာသုံးနိုင်တယ်။ ၎င်းသည်အခြား distros များကဲ့သို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပဲ Ubuntu ထက်ကိုင်တွယ်မှုသည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။
အခက်အခဲမရှိဘဲ, CentOS6ကိုကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစနစ်အဖြစ်ခဏအသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ သိုလှောင်ခန်းများတွင်မရှိသောအချို့စာကြည့်တိုက်များ မှလွဲ၍ စာကြည့်တိုက်များ၏မူကွဲများနောက်ကျလွန်းသောကြောင့် စုစည်း၍ မရပါ။
CentOS7(RHEL7ဟုလည်းခေါ်သည်) နှင့် ပတ်သက်၍ Fedora 19 သည်အခြေခံအားဖြင့် Fedora 21 မှတရားဝင်ထောက်ခံထားဆဲဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်သင်အဲဒါကိုသုံးနိူင်ပြီး Taringa မှာဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာ post တစ်ခုထားခဲ့တယ်။ 😀
GNOME 3.8.4? ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ။ ငါပိုကောင်းတဲ့ XFCE နှင့်ကပ်။
စကားမစပ် CentOS7ဟာ RHEL မှာလာမယ့် Classic Shell နဲ့လာပါသလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ CentOS7ဟာ RC of RHEL7ကိုအခြေခံထားလို့ပါ။
ဤဖြန့်ချိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာမှာ Red Hat သည် RHEL ကိုယ်ပွားကလေးသို့အပိုအင်္ဂါရပ်များထည့်သွင်းလိုပါက၎င်းသည်၎င်း၏တရားဝင် backport ကိုပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
အခြား Anagonda graphical installer ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်ဖို့ငါဆုတောင်းတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကနောက်တစ်ခါကြိုးစားပြီး 96 MB ထက်သေးငယ်တဲ့ဗွီဒီယိုကဒ်တွေပေါ်မှာမတက်ခဲ့လို့ပါ။
ငါသေချာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် Gnome ကို version 3.8 အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းဟာပြောင်းလဲမှုဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ထက်ပိုပါတယ်။ ငါ Debian ကိုစမ်းသပ်နေတုန်း Gnome-Shell 3.4 နဲ့စမ်းသပ်ပြီးကတည်းကငါ KDE or XFCE ကိုသုံးတယ်။ ငါမုန်းတယ်။ ပြmonthsနာမရှိဘဲနှစ်လဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် Linux တွင်တည်ရှိပြီးအမြန်ဆုံးနှင့်အကျိုးအရှိဆုံး desktop ဖြစ်သည် .. အလေးအနက်ပြောရလျှင် ..
စင်စစ် CentOS သည်ပုံမှန်အားဖြင့် Gnome-classic ဖြင့်စတင်သည်။ သို့သော် Gnome-classic သည် Gnome-Shell ထိပ်ရှိ plugins များပေါ်တွင်အခြေခံသောကြောင့် Gnome-Shell ကို GDM မှရွေးချယ်နိုင်သည်။
CentOS သည် RHEL RC ပေါ်တွင်အခြေမခံပါ။ သို့သော်မူရင်းကုဒ်အားလုံးပြုစုသည့်နောက်ဆုံး RHEL အပေါ်မူတည်သည်။ Red Hat သည် CentOS ကိုထောက်ပံ့သောကြောင့်၎င်းသည်ပေါ်ထွက်လာရန်တစ်လခန့်မလိုခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် RHEL6/ CentOS6နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်သည်။
Gnome ကိုမကြိုက်လျှင် CentOS-7-live-KDE ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါ။ 🙂
ကောင်းပြီ၊ GNOME Classic-Shell မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်ကိုကြည့်ရအောင်။ အမှန်တရားမှာ GNOME3Shell သည်ကီးဘုတ်ပေါင်းစပ်မှုများနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
EPEL repository မှရရှိနိုင်သည့် Cinnamon 2.0.14 သို့မဟုတ် Mate 1.8 Desktop ကိုလည်းသုံးနိုင်သည်
Slackware, petercheco မှဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ
ကောင်းပြီ Slackware သည်အလွန်ကောင်းသော distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဤမျှလောက်များပြားသောစုစည်းမှုနှင့်အတူစိတ်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည် .. CentOS သည်ပြီးပြည့်စုံသော distro တစ်ခုဖြစ်ပြီး Red Hat နှင့်ဆက်နွှယ်သည့်အရာအားလုံးသည်ယနေ့ခေတ်တွင်စံဖြစ်သည်။ 😀
Bah ။ Slackware repos ၎င်းတို့ကို Gentoo မှမပေးသောအဆင်သင့်သုံးနိုင်သောဖိုင်တွဲများတွင်လည်းရနိုင်သည်။
စိတ်မပူပါနဲ့ကောင်းချီးပေးတဲ့ package တွေစုဆောင်းရတာကိုမုန်းတယ် (ဒီတော့ Slackbuilds နဲ့ငါ့ရဲ့မကျေနပ်မှု)
ငါပြောခဲ့တာက Chromium ကိုငါ့လက်တော့ပ်ထဲမှာသုံးနာရီခွဲကြာအောင်စုစည်းထားတာကရယ်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ D: ငါလိုအပ်တာက software ကိုရရှိနိုင်ဖို့နဲ့အဲဒါကိုပေးတဲ့ repository ကစိတ်ချဖို့ပဲ။ Salix or Slackel သူတို့သူတို့ငါ့အားထိုလမ်းမထင်ရ repos RHEL / CentOS သည် linux world တွင်စံသတ်မှတ်ချက်မှအပအခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုနည်းတူစွာပင် Gentoo နှင့် USEs တို့၏စောင့်ရှောက်မှုတွင်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။
k1kin ဒါဟာ binary ကပိုကောင်းတယ်မဟုတ်ပါ၊ တကယ်တော့ငါ system တစ်ခုလုံးစုစည်းထားတာအရမ်းအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကသူ့ရဲ့နယ်ပယ်ကိုသိတယ်၊ အလွန်ကောင်းသည့်နေရာသည်အရင်းအမြစ်နည်းသောကွန်ပျူတာများဖြစ်သည်။ သင်က၎င်းကိုအစွမ်းထက်သောအရာတစ်ခုအဖြစ်စုစည်းထားသည်။ ပြproblemနာများစွာလည်းမဖြစ်သင့်။
ဒါတောင်မှ Sabayon ဟာကြည့်ရတာထိုက်တန်ပါတယ်။
Stella7ထွက်ပေါ်လာရန်စောင့်ဆိုင်းရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ ၎င်းသည် CentOS Clone ဖြစ်သော်လည်း Desktop ပေါ်တွင်သာအဓိကထားသည်
ဟေးကောင်တွေ၊ ခဏလောက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ခဏခဏခွင့်လွှတ်ပါ။ LiveCD မှာ mouse ကိုအလုပ်လုပ်အောင်ငါနဲ့တူသူတစ်ယောက်တည်းရှိလား။
ငါ CentOS6 နှင့် Stella နှင့်အတူတူပင်ပြhadနာရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် kernel ပြproblemနာဖြစ်သည်ဟုယူဆပြီး၊ ငါ keyboard နှင့် netinstall လုပ်ရန်ပျင်းရိသောနောက်လာမည့် version ကိုစောင့်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Fedora မှာသူကငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်၊ OpenSUSE ကငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်၊ အခြား RPM မှာငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။ Debian နဲ့ Arch world ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။
ငါပြtheနာအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးပြီ, ဒါပေမယ့်ငါ့အ motherboard အခြေခံအားဖြင့် IOMMU ရှိသည်မဟုတ်သောကြောင့်, ငါ့အဘို့အမြန်ပြင်ဆင်မှုရှိသည်ထင်မထားဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုကေဘယ်ကြိုးပေးနိုင်မလား။
@petercheco ငါဆိုလိုသည်မှာ Centos7အတွက် EPEL repo ၌ beta ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တစ်ခုခုပြိုကွဲပါက epithets နှင့်အတူမိုးရေကျလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ခင်ဗျားရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. တကယ်တော့ဒီ repo ဟာ beta ထဲမှာရှိနေသေးပေမယ့်တစ်ပတ်တောင်မပြည့်သေးဘူးလို့ထင်ရလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံး (Fedora) ။ Fedora မှယောက်ျားတွေဟာ packets အချို့ကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးသွားပြီ (၁၀၀ ထက်နည်းသောကျန်) ။ သူတို့ဟာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးသိပ်ပြီးသိပ်မသုံးကြတဲ့ packets တွေပါ။ သူတို့ကိုဘယ်သူမဆိုအသုံးပြုနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။
မည်သူမဆိုသူတို့မည်သည့်နေရာတွင်ခေါ်သည်၊ မည်သည့်နေရာတွင် desktop ဆောင်ပုဒ်နှင့်ဤဖြန့်ဝေမှုအတွက်ပုံရိပ်များရှိအိုင်ကွန်များကိုငါရသနည်း။
အကယ်၍ မင်းဆိုလိုတာကငါ့လမ်းညွှန်၏အဓိကအကြောင်းအရာနှင့်သင်္ကေတများသည် Numix Theme နှင့် Numix-circle icon များဖြစ်သည်
ပေါလ် နာဗာရို ဟုသူကပြောသည်
ငါရွေးချယ်လိုက်သော option များထဲမှမည်သည့်အရာကကျွန်ုပ်ကို virtual machine ၌ဖွင့်ရန်ကူညီပေးသည်ကိုငါသိလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ် download လုပ်ပြီးအမှားတစ်ခုရ ခဲ့၍ ဤစာမျက်နှာမှ၎င်းကိုမ download ပါ။ သူတို့ကျွန်တော့်ကိုဖြေဖို့သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်
paul navarro အားပြန်လည်ပြောဆိုပါ
AwesomeWM 3.5: လှပသော themes များတပ်ဆင်ပြီးပြသရန်
အကောင်းဆုံး Linux Desktop: ဇွန် ၂၀၁၄ - ရလဒ်